Xogta Akhlaaqda Dijitaalka ah: Sirta Ugu Fiican ee Lagu Garaaco Chord Xaqa Gen Z | Martech Zone
Xogta Akhlaaqda Dijitaalka ah: Sirta ugu Fiican ee Lagu Garaaco Chord Xaqa leh Gen Z
Sabtida, Diisambar 19, 2020 Sabtida, Diisambar 19, 2020 Lisa Speck
Istaraatijiyadaha ugu guulaha badan ee suuq geynta waxaa shidaal siiya faham qoto dheer oo ku saabsan dadka loogu talagalay inay gaaraan. Iyo, ka fiirsashada da'da waa mid ka mid ah saadaaliyayaasha ugu caamsan ee kala duwanaanta dabeecadaha iyo dabeecadaha, fiirinta muraayadaha jiilka ayaa muddo dheer ahaa hab waxtar u leh suuqleyda si ay ugu abuuraan naxariis dhagaystayaashooda.
Maanta, go'aan qaadayaasha shirkadaha horay u janjeera waxay diiradda saarayaan Gen Z, oo dhashay wixii ka dambeeyay 1996, waana sax. Jiilkani wuxuu qaabeyn doonaa mustaqbalka waxaana lagu qiyaasaa inay horey u haysteen intii la mid ah $ 143 bilyan xagga kharash bixinta. Si kastaba ha noqotee, xaddiga aan horay loo arag ee cilmi-baarista aasaasiga ah iyo tan sare ee lagu fulinayo kooxdan uma muuqato inay ku sii socoto si ku filan.
In kasta oo si ballaaran loo ogyahay in Gen Z uu matalayo dadka ugu horreeya ee dhabta ah ee dhijitaalka ah, hababkii caadiga ahaa ee loo qaaday si loo ogaado baahidooda iyo himilooyinkooda nooma sheegaan waxqabadyadooda dijitaalka ah ee dhabta ah. Istaraatijiyadaha suuq geynta mustaqbalka ee soo noqnoqonaya ayaa si weyn ugu xirnaan doona fahamka guud ee shakhsiyaadkaas, oo soo bandhigaya daruuri: Calaamaduhu waa inay ballaariyaan ujeedadooda dhismaha naxariis si ay ula xisaabtamaan dhinacyada dijitaalka ah ee aqoonsiga jiilkan.
Gen Z oo kujira Qiimaha Face
Waxaan u maleyneynaa inaan ognahay Gen Z. Inay iyagu yihiin jiilka ugu kala jaadka badan wali. Inay yihiin kuwo adkaysi badan, rajo leh, hami leh, kuna wajahan xirfad. Inay rabaan nabad iyo aqbalaad dhamaan, adduunkana ka wanaajiyaan. Inay leeyihiin ruux hal abuur ganacsi oo aysan jeclayn in sanduuq lagu rido. Iyo, dabcan, inay ficil ahaan ku dhasheen taleefan casri ah oo gacantooda ku jira. Liistadu way sii socotaa, oo ay ku jiraan raadka aan la dafiri karin ee ah da'da soo socota inta lagu jiro xiisadda COVID-19 waxay ku sii socon doontaa jiilkan.
Si kastaba ha noqotee, heerkayaga faham ee jira ayaa kaliya xoqaya dusha sare laba sababood oo muhiim ah:
Taariikh ahaan, fikradaha jiilalka - iyo dhowr qaybood oo macaamiil ah - ayaa inta badan lagu soo uruuriyaa iyada oo loo marayo isbeddellada la odorosay iyo jawaabaha sahanka. In kasta oo dabeecadaha iyo dareennada la sheegay ay yihiin wax-soo-saar muhiim ah, haddana bani-aadamku inta badan wuxuu la halgamayaa inuu dib u xasuusto waxqabadyadoodii hore oo had iyo jeer si sax ah uma sheegi karo dareenkooda.
Runta arrintu waxay tahay in Gen Z uusan xitaa ogeyn cidda ay yihiin weli. Aqoonsigoodu waa bartilmaameed dhaqaaq ah maadaama ay ku dhexjiraan marxaladdii ugu dhisneyd noloshooda. Dabeecadooda naftooda ayaa is beddeli doonta muddo ka dib-si aad uga weyn sidii ay u ahaan lahayd fac weyn, fac weyn.
Haddaan eegno Millennials iyo sida aan horay ugu khaldnay, cilladaha dhaxalka ee ku wajahan barashada jiilalka ayaa muuqda. Xusuusnow, markii hore waxaa lagu calaamadiyey inay leeyihiin anshax xumo iyo daacadnimo la'aan, taas oo aan hadda ognahay inaysan run ahayn.
Si qoto dheer u qodista Xogta Akhlaaqda Dijital ah
Cabbirida Gen Z ka jira isgoyska dijitaalka iyo dhaqanka. Mahadnaqa horumarka tikniyoolajiyadda, markii ugu horreysay tan iyo jiilalka la barto, suuqleydu waxay marin u helaan macluumaad hab-dhaqan hodan ah oo daaqad ka siiya waxqabadyada tooska ah ee tooska ah ee internetka 'Gen Z' faahfaahin qoto dheer. Maanta, kumanaan dad ah 24/7 dabeecadaha dhijitaalka ah ayaa si isdabajoog ah, haddana loo ogol yahay, loola socdo
Xogta habdhaqanka dijitaalka ah, markii lagu dhex daro qadka toosan iyo xogta la sheegay, waxay abuureysaa sawir dhameystiran oo iskutallaab ah oo ka hadlaya shakhsiyaadkan ku teedsan waxa iyo sababta Markaad kasbato aragtidan guud, waxaad kaheleysaa runti sirdoon ficil ah oo aad ku qaabeyn karto istiraatiijiyad suuqgeyn ah.
Halkan waxaa ah dhowr siyaabood oo xogta habdhaqanka dhijitaalka ahi ay gacan uga geysan karto sare u qaadista fahamka iyo saxnaanta saadaasha ku saabsan Gen Z — ama qeyb kasta oo macaamiil ah - iyadoo aan loo eegin saldhigga aqoonta aad ka bilaabaneyso.
Hubinta dhabta ah: Ku kasbo aragti dadka dhagaystayaasha ah ee aanad waxba ka ogayn, iyo baaritaanka xiidmaha haddii aad sii sii baari doontid. Tusaale ahaan, waad baari kartaa qaybta iyo ujeedooyinka nooca. Waadna baran kartaa sida ay macaamiisha qaab dijitaalnimo ku dheehan tahay u dhaqmayaan.
Cabbir cusub: Kudar lakabyada dhagaystayaasha aad horeyba wax u taqaanay, laakiin kuma filna, ku saabsan. Haddii aad leedahay qaybo muhiim ah iyo shaqsiyaad horeyba loo aasaasay, ogaanshaha waxa ay ku sameeyaan khadka tooska ah waxay daaha ka qaadi karaan aagagga fursadaha aan lagaranayn.
Tilmaam: Daboolida ku kala duwanaanshaha jawaabaha la sheegay — oo muhiim u ah kiisaska shaqsiyaadka ku guuldaraystaan ​​inay si sax ah u xasuustaan ​​hawlahoodii hore.
Ogaanshaha si hubaal ah sida macaamiisha ay ugu dhexjiraan muuqaalka ballaaran ee dhijitaalka ah waa mid awood badan, gaar ahaan suuqgeynta dhijitaalka ah. Soo-gaadhista baraha guud ee la booqday, dabeecadaha goobidda, lahaanshaha abka, taariikhda iibsiga, iyo inbadan ayaa tilmaam u noqon kara qofka qofku yahay, waxa uu daneeyo, waxa uu la dhibtoonayo, iyo dhacdooyinka waaweyn ee nolosha. Ku hubaysan dareenkan xoogan ee Gen Z dhammaan nuskooda, suuqleydu waxay dhigi karaan dallacsiin, bartilmaameedka iibsiga warbaahinta, hagaajinta farriinta, iyo habeynta waxyaabaha-iyo waxyaabo kale-kalsooni buuxda.
Wadada loo maro
Si loo ogaado xogtan inay jirto oo aan laga faa'iideysan waa in si kas ah loo doorto inaan la fahmin macaamiisha. Taasi waxay tiri, maahan in dhammaan ilaha xogta habdhaqanka dhijitaalka ah loo siman yahay. Kuwa ugu fiican waa:
Ka-bax, oo macnaheedu yahay guddi kaqeybgalayaashu iyagoo og ogalaanaya in dhaqankooda la ilaaliyo, waxaana jira isdhaafsi qiimo cadaalad ah oo udhaxeeya cilmibaaraha iyo macaamilka.
Longitudinal, hawlahaas ayaa lala socdaa saacad iyo saacadba, taas oo iftiimin karta daacadnimada ama la'aanta iyada oo ay weheliyaan isbeddelo kale.
Xoogsho, sameynta guddi akhlaaqeed oo ku filan cabir ahaan si loo gaarsiiyo muunad wakiil matalaya howlaha dijitaalka ah ee macaamiisha iyo xog ku filan sumaddaada si aad ugu shaqeyso.
Qalabaynta qalabka, iyadoo la siinayo awoodda lagu fiirsado desktop-ka iyo dhaqamada moobiilka.
Caddayn cookie, oo macnaheedu yahay in aan lagu tiirsaneyn cookies, taas oo noqon doonta shuruudo mustaqbalka dhow.
Maaddaama Gen Z uu sii socdo isbeddelkiisa, isdhexgalka ay la leeyihiin boqortooyada dhijitaalka ah ayaa door muhiim ah ka ciyaari doonta wacyigelinta suuqleyda sida loola macaamilo, loo kasbado kalsoonidooda, loona dhiso xiriiro waara. Noocyada ugu fiican ayaa qaadan doona cabbirkan cusub ee xogta oo ah cabbir cusub oo ka mid ah ka-faa'iideysiga tartanka, ma ahan oo keliya istiraatiijiyado fiiqan oo wajahaya Gen Z, laakiin dhagaystayaasha bartilmaameedka ah.
Tags: aragtida dhagaystayaashaxogta akhlaaqdacookiesiskutallaabtaxogta habdhaqanka dijitaalka ahgen zjiilka zjiilalkaxogta juqraafimillennialsdooran insixitaan
Lisa Speck waa turjubaanka waayeelka ee Gongos, oo ah hay'ad wadatashi ah oo diirada saareysa wadida udub dhexaadka macaamiisha ee shirkadaha Fortune 500.
Qwilr: Nidaamka Naqshadeynta Dukumintiga ee Iibinta Isbeddelka Iibinta iyo Wadajirka Suuqgeynta
Mawduuca Gates: Albaabkaaga ee B2B Wanaagsan Ayaa Hogaaminaya!